Ithegi: ccpa | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 26, 2021 NgoLwesibini, Februwari 9, 2021 Douglas Karr
Imiceli mngeni yokuThengisa-kunye nezisombululo-ze-2021
NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2021 NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2021 U-Rich Smith
Kunyaka ophelileyo ibingumbhodamo wokukhwela kubarhwebi, kunyanzelwa amashishini phantse kuwo onke amacandelo ukuba ajikeleze okanye athabathe indawo yezicwangciso zonke phantsi kweemeko ezingathethekiyo. Kwabaninzi, olona tshintsho lubalulekileyo yayiyimpembelelo yokuphambuka ekuhlaleni kunye nendawo yokuhlala, eyadala ispike esikhulu kwintengiso ye-Intanethi, nakwimizi-mveliso apho i-ecommerce yayingaziwa ngaphambili. Olu tshintsho lukhokelele kubume bedijithali obuxineneyo, kunye nemibutho emininzi elwela abathengi
NgoMvulo, Agasti 10, 2020 NgoMvulo, Agasti 10, 2020 URachel Skroback
Ukuba ujonga indlela elula, efanelekileyo, nekhuselekileyo yokuqokelela ulwazi oludingayo kubaxumi bakho, amavolontiya, okanye amathemba, amathuba okuba umakhi weefom kwi-Intanethi angayonyusa imveliso yakho ngokucacileyo. Ngokufezekisa umakhi weefom kwi-Intanethi kumbutho wakho, uya kuba nakho ukuyeka iinkqubo zokuthatha ixesha kunye nokugcina ixesha elininzi, imali kunye nezixhobo. Nangona kunjalo, zikhona izixhobo ezininzi phaya onokukhetha kuzo, kwaye ayizizo zonke izinto ezakhiweyo zefomathi ezikwi-intanethi ezenziwa zilingana.
Iicookies azisaSebenzi kwi-Fortune: Indlela isazisi kunye nokwenza ubuqu umntu atshintsha kwilizwe lePost-Cookie
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 18, 2020 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 18, 2020 UDiaz Nesamoney
Xa singena kwi-app yethu ka-Uber, ikhupha ngokuzenzekelayo iindawo zethu ezisandula ukufika. Xa sityelela iwebhusayithi yempahla, sibona izinto ezicetyiswayo ezivela kwizinto esazithengile ngaphambili. Xa sikhangela izixhobo zokukhempisha kwi-intanethi, sikhutshelwa ngokukhawuleza iintengiso ezifanelekileyo zebhanile zorhwebo. Xa sivula uGoogle okanye iiMaphu zika-Apple, sinikwa indawo ekuyiwa kuzo njengesiqhelo ngokuya ngexesha kunye nendawo esikuyo. Konke malunga nokwenza umntu kwaye zonke izinto zisezantsi kwinto enye-
Isazisi sePuzzle kuLawulo lweDatha yaBathengi
Lwesine, Okthobha 18, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 USameer Narula
Ingxaki yesazisi sabathengi Kwintsomi yamaHindu, uRavana, umphengululi omkhulu, kunye nedemon, uneentloko ezilishumi, ezibonakalisa amandla akhe nolwazi. Iintloko zazingenakutshatyalaliswa ngamandla okwenza i-morph kunye ne-regrow. Kwimfazwe yabo, iRama, uthixo oligorha, ke kufuneka ahambe ezantsi kweentloko zikaRavana kwaye ajolise utolo entliziyweni yakhe eyedwa ukumbulala. Kumaxesha anamhlanje, umthengi ufana noRavana, hayi ngokweyakhe